खुशीको खबर: विदेशबाट फर्केकाले पाउने भए १० लाख, हेर्नुस कहिले सम्म छ म्याद ?
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किएकालाई १० लाखसम्म ऋण दिने भएको छ । विदेश गएर आएकाहरुलाई स्वदेशमै रोक्न ऋण व्यवस्था गरेको हो ।
विदेश गएर फर्किएकाशहरुले स्वदेशमै रोजगारी गरुन भनेर धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बोर्डका शाखा अधिकृत गोविन्द आयार्यले बताउनुभयो । सहुलिय कर्जा लिन चाहनेले निवेदन दिनुपर्छ । त्यसको लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दर्खास्त आव्हान गरिसकेको छ ।
आचार्यका अनुसार सहुलियत कर्जाको लागि परियोजना नै धितोमा राख्नुपर्छ । विदेशमा कम्तीमा ६ महिना काम गरेकाहरुले मात्र सहुलियत कर्जा पाउने व्यवस्था छ । लिन चाहनेले नागरिकताको प्रतिलिपी, विजदेशमा कामको अनुभवपत्र, र श्रमस्वीकृत पत्र लगायतका कागजातसहित बोर्डको सम्पर्क कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । विदेशबाट फकिएको ३ वर्ष नाघेका, बिदेशमा स्थाई बसोबार (पीआर) का हकमा यो नियम लागु नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले १० लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले नै तिर्नेछ भने बैंकले २५ प्रतिशत ब्यहोर्नेछन् । तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरिए बैंकले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्ने व्यवस्था छ ।५ वर्षका लागि दिइने ऋणमा बैंकले ब्याजको आधार दरभन्दा २ प्रतिशत बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । ऋणदिँदा ब्याजमा ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । ऋण नतिरेमा सरकारले ऋणीलाई कालोसूचिमा राखि सरकारी सेवा सुविधा, राहदानी रोक्का, चलअचल सम्पत्ति विक्री वितरणमा रोक लगाउने व्यबस्था छ ।
Posted in Banner News, बैदेशिक रोजगार, समाचार
७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १२:०० 23/11/2018 by महेश शर्मा
बिधेयक पास हुने नहुनेबारे बल्ल आयो सरकारको आधिकारिक धारणा, प्रबक्ता भन्छन आन्दोलनको तुक छैन !
यस्ती बुढी आमालाई कसले बोकायो २ किलो अफिम, बुढेसकालमा बर्बाद हुने भयो जोगमायाको जिबन !
बाहिरियो गोंगबु बसपार्कको दर्दनाक दृश्य, महिलाले चलाएको योन अखडा !
सपनामा सम्भोग गरेको देख्नु भयो, जान्नुहोस कोसँग गरेको देखेमा के हुन्छ ?